I-Photocall TV: ungazibona njani ngaphezulu kwamajelo ayi-1.000 simahla ngokuchofoza nje | I-Androidsis
I-Photocall TV: ubukela ngaphezulu kwamajelo ayi-1.000 XNUMX simahla ngokuchofoza nje
UDaniPlay | 09/07/2021 10:47 | Izaziso
Ukusetyenziswa kokusasazwa kuye kwanda kule minyaka imbalwa idlulileyo. Zininzi iinkonzo ezikhoyo namhlanje zokubukela zonke iintlobo zomxholo, nokuba kungothotho, amaxwebhu kunye neemovie, kunye nezifutshane kunye neziqeshana ezinomdla kwizigidi zabantu.
Elinye lamaqonga lawo Ufumene abalandeli kwiinyanga ezidlulileyo yiFotocall TV, Isisombululo esifanelekileyo ukuba ufuna ukubukela naliphi na ijelo ngokuchofoza kulo. Ukongeza, iphepha linokufikelela kwizikhululo zikanomathotholo ezaziwa kakhulu eSpain, phesheya kwaye ezinye azaziwa.
1 Yintoni iPhotocall.tv
2 Isebenza njani iPhotocall.tv
3 Imijelo ekhoyo
4 Zilungele zonke iintlobo zezixhobo
5 Ifoto yomgangatho weTV
6 Eminye indlela eya kwi-PhotoCall TV
7 IPluto TV, enye into enomdla
8 Kodi, iziko lemultimedia elinendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo
Yiphepha lewebhu elimiselwe ukukhutshwa kwamajelo avela eSpain, eYurophu nakwilizwekazi laseMelika, nto leyo eyenza kube lula kubasebenzisi ukubona ijelo ngokuthe ngqo ngokunqakraza kumfanekiso wejelo. Nje ukuba ucofe kwelinye lamajelo iya kukubonisa ikhonkco ngqo ukuya kusasazo.
Ithathwa njengenye yeethelevishini zokuqokelela ezona ziindidi ngeendidi, okoko kwi-International kukho iindidi ezinkulu, ezinikezela ukuya kumajelo ayi-1.000 XNUMX. IFotoocall.tv ihlala ihlaziywa ngamaxesha athile, nokuba kungongezwa amajelo kuluhlu olude, kodwa nangokulungisa iimpazamo abadla ngokuzixela abasebenzisi.
Enye yeengxaki ezimbalwa ezinokubangelwa kukuba ayiyalwanga ngamacandelo, nangona oku, nganye ibonisa igama eyaziwayo ngayo. Iithebhu zeSizwe, zeHlabathi, ezinye (iitshaneli ezahlukeneyo), Unomathotholo (kubandakanya nezikhululo zikazwelonke nezamazwe aphesheya), Isikhokelo, Ulwazi kunye neVPN. Inketho yokuKhanya iya kutshintsha ithoni emnyama ibe mhlophe kunye nohlobo olwaziwa njengokukhanya.
Isebenza njani iPhotocall.tv
Umsebenzi we-Photocall TV ululaNje ukuba ucofe kumfanekiso wesikhululo sikamabonwakude, iya kubonisa amakhonkco aliqela, ubuncinci, nokuba linye. Eyokuqala kuzo zihlala zisisigxina ngokuthe ngqo kusasazo, ezinye zihlala zinolwazi, nokuba sisikhokelo okanye kunokwenzeka ukubona ezinye iintlobo zomxholo ngaphakathi kwiwebhu.
Nje ukuba uvule ijelo bukhoma kuya kukusa kwiphepha le-Photocall TV ngeendlela ezahlukeneyo zaso nasiphi na isidlali sevidiyo. Ukuba, umzekelo, uvula i- «La 1», unomgangatho osezantsi Ukukhupha, ivolumu, ukhetho lokunciphisa kunye nokukhulisa isikrini.
Ezinye zeendlela zonxibelelwano zikamabonakude zinokhetho lokubukela iimovie, enkosi ngokuya kumxholo obonelelwe ngumntu ngamnye kubo. Oku kuyakunceda kwimeko apho sifuna ukuhambisa le micimbi singenamdla kuyo kwaphela, oku kuhlala kwenzeka kwiimeko ezininzi.
I-Photocall TV yongeza uluhlu olukhulu lwamajelo afikelelekayo kubasebenzisi abasebenzisa iqonga, namhlanje abangamawaka abantu. Phakathi kwabo akukho kunqongophala kweendlela ezizimeleyo zaseSpainPhakathi kweCanal Sur, i-TV3, i-TV Galicia, kunye nezinye zesizwe, kubandakanya i-Antena 3, Telecinco, TVE-1, La Sexta nezinye ezininzi.
Kuluhlu kukho ezinye ukubona uluhlu olunjengeFactoria de Fición kunye neA3 Series, ezemidlalo, phakathi kwazo kungabikho ukusilela kweGol Televisión, iReal Madrid TV, iBarça TV, iLas Palmas TV, iBetis TV kunye neSevilla FC TV. Ukongeza, kwicandelo laMazwe ngaMazwe iindidi zihamba indlela ende., njengoko kukho amagama amakhulu afana ne-CNN, Fox, BBC, Euro News, kunye namajelo angaphezu kwe-150 ahlukeneyo.
Sele ikhona «Okunye» kukho iintlobo ngeentlobo amajeloNokuba ziyimidlalo okanye eminye imixholo, kufanelekile ukukhankanya ezinye ezibalulekileyo ezinje nge-AMC, iSyfy, iVevo (ijelo lomculo), iRed Bull TV, iNFL, iMoto GP kunye neethelevishini ezingaphezu kwekhulu. Abanye bahlala benokhetho lokujonga umxholo kwiphepha ngokwalo, ngelixa abanye bethumela kwiphepha elisemthethweni.
Ukuba uthatha isigqibo sokumamela kwizikhululo zikanomathotholo, I-Photocall TV inika njengesalathiso esihle kusasazo olwahlukeneyo oluyi-120, nokuba uthetha ngezopolitiko, ezemidlalo kunye nezinye iintlobo. Amatyathanga anjenge-Europa FM, iCope, iOnda Cero, iCadena Ser, iRadio, iRadiolé, iMelodía FM kunye nezinye ezingama-200 ziyafumaneka ngaphezulu konqakrazo.
Zilungele zonke iintlobo zezixhobo
Okwangoku, inkonzo ye-Photocall TV iyafumaneka kwiwebhuAyinasicelo kwaye iyasetyenziswa kuzo zonke ii-smartphones, iipilisi, iikhompyuter kunye neeTV zeTV. Ukuyisebenzisa kuya kufuneka usebenzise isikhangeli kuzo zonke iimeko, enye yezo zihambelana nephepha yiGoogle Chrome.
NjengakwiChannel, iyahambelana nezinye izikhangeli ezaziwayo, kubandakanya iMozilla Firefox, Edge, Opera, ngelixa isebenza eSafari. Iwebhu ithambekele ekulayisheni ngokukhawuleza, kufuneka ube nesantya uqhagamshelo olukhawulezayo noluzinzileyo, kucetyiswa ukuba ubukele umabonwakude kumgangatho ophezulu.
Eli phepha libonisa umbala omnyama, nangona uguqulelo lwaziwa ngokuba kukuKhanya itshintsha ibe ngumthunzi okhanyayo, ngakumbi umhlophe. I-Photocall TV ngaphandle kokulula kwayo ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zigqibeleleyo, ukuba neZiteshi ze-DTT njengokhuphiswano, nangona oku kuhlala kunika umxholo wengingqi nowelizwe.
Njengokuba oko kwakungonelanga, i-Photocall TV inokumiliselwa ukusuka kwifowuni ukuya kwiscreen, inikezela umgangatho ophezulu kwisisombululo esiphakamileyo. Kwi-VPN kukho ukhetho lokufumana le nkonzo kwii-VPN ezaziwayoPhakathi kwazo kukho i-ExpressVPN, iCyberghost, iNordVPN kunye neHolaVPN.
Ifoto yomgangatho weTV
Umgangatho wawo onke amajelo uhlonipheke ngokwenene, iya kusebenzisa uqhagamshelo lwe-Intanethi, kuhlala kucetyiswa ukuba usebenzise uqhagamshelo lweWiFi ukunqanda ukuchitha ii-megabytes zenethiwekhi yeselfowuni. Zonke iitshaneli zibonisa isisombululo esibalulekileyo, siyakuguqulwa ngumsebenzisi ukuba ufuna ukubukela zonke iintlobo zamajelo.
Ibonisa unxibelelwano nazo zonke iidilesi ezisemthethweni ngaphandle kokulayisha idilesi yefotocall.tv, inika umsebenzisi oko bafuna ukukubona ngalo mzuzu kanye. Zimbalwa iziteshi ezisasazwa ngoku kumgangatho we-4K, kodwa uninzi luvelise kwakhona kwiimpawu ezisusela kwi-720 ukuya kwi-1080p.
Eminye indlela eya kwi-PhotoCall TV
Namhlanje fumana enye indlela kwi-Photocall TV Kuphantse kube nzima ukubona uluhlu olukhulu lweziteshi, iqonga lidlala amajelo ngokuthe ngqo kwiimeko ezininzi. Ezinye usetyenziso zisebenzisa amakhonkco ngqo kwiitshaneli.
Enye yeendlela ezizezinye kule nkonzo ngamajelo e-TDT, usetyenziso alufumaneki kwiVenkile yokuDlala, ekuphela kwento onokuyenza kukukhuphela kwiwebhusayithi yayo esemthethweni. Amajelo onke yi-DTT, ukongeza ukongeza ezinye ezingekho kwiqonga lemimandla eyahlukeneyo.
Ngaphandle kwamajelo e-DTT, ukusetyenziswa kweziteshi ezahlukeneyo ziyafumaneka, Oku kuyakuhlala kuxhomekeka ekuboneni yonke imixholo ngabo. Uya kuba nakho ukubona bukhoma, ubone iinkqubo zokutshintsha kunye nomxholo okhethekileyo ukuba uya kwiNkulumbuso ngobhaliso.
Ukukhangela iphepha elifanayo, inye kuphela efana ne-Photocall TV yiTeledirecto, nangona ibonisa uluhlu lweendlela ezisezantsi. Isebenza kakuhle xa uqhagamshela kwisitishi ngasinye ngokuthe ngqo, ibonisa zombini umgangatho kunye neendlela ezahlukeneyo.
Olunye ukhetho kwiTV yePotocall
IPluto TV, enye into enomdla
Elinye lamaqonga akhule ngokuhamba kwexesha yiPluto TV, eyona nto intle ngayo kukuba isebenza ngokuthe ngqo kwaye ngaphandle kokusika. Yinkonzo enamajelo amaninzi, apho unokujonga zonke iintlobo zeemovie, amaxwebhu, uthotho kunye neenkqubo ngeSpanish.
Isikhokelo sikubonisa yonke into ukuze ungaphoswa siwo nasiphi na isiqulatho esikunika yonke imihla, ngaphandle kokuba unomxholo kwimfuno, kunye nokubukela imovie nanini na xa sifuna. IPluto TV njengenxalenye ebalulekileyo Inezivumelwano neenkampani ezinkulu ezifana neMTV, ukongeza ekubeni namajelo osasaza uthotho lwentsomi.
IPluto TV ineendidi ezizodwa ukuze singaphosi nantoni na, ngokunika ithuba lokubonisa uthotho lwabantwana lwabancinci endlwini, umculo kunye namajelo ezemidlalo kunye nezinye izinto ezahlukeneyo. Yindlela eyahlukileyo kwaye kubhejwa ukuba ukuba siyaqhubeka kuya kusitsala ngendlela enkulu.
Kodi, iziko lemultimedia elinendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo
Ukuba ufuna ukudlala amajelo ngeziko lemultimedia, olona khetho lufanelekileyo kukufumana iRhafu, isicelo esithandwayo onokunxibelelana nezinye iinkonzo. I-Kodi ikuvumela ukuba uqhagamshele kwimithombo, kubandakanya umzekelo iPluto TV, iAmazon Prime Video, iRakuten TV, kunye neminye imithombo, kubandakanya i-IPTV.
Into emnandi malunga neRhafu kukuba liqonga lomnqamlezo, elikuzo zonke iinkqubo zokusebenza, i-Android, i-iOS kunye nokufakwa njengesicelo kwiiTV zeTV. Inokuba sisicelo sokuthatha naphi na, okoko uMdlali ihlala ibaleka kwaye iqhagamshele kuyo nayiphi na inkonzo ngokukhawuleza.
Ukongeza iifonti kwenza ubhetyebhetye, ukuba yenye yeapps Ukwazi indlela yokuphatha kuya kuyenza ibe yenye yezona zinto zigqibeleleyo, ezisebenzayo kwiBhokisi ye-Smart TV ngenkqubo ye-Android. Uluhlu lwamajelo alunasiphelo, kuba unokunxibelelana ngokuthe ngqo namajelo kamabonakude athandwayo.
Enye yeendlela ezininzi onokukhetha kuzo kwi-Kodi kukuba iyakwazi ukudlala iifayile kwi-pendrive, nokuba ziifayile zeaudiyo kunye nevidiyo, kunye neelayibrari. Ngaba Player liziko elibalulekileyo lemultimedia kwaye enye yezo ongenakuphulukana nazo ukuba ufuna ukubona umxholo ngokukhawuleza ngokudibanisa neeseva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Photocall TV: ubukela ngaphezulu kwamajelo ayi-1.000 XNUMX simahla ngokuchofoza nje
Ezona zixhobo zokukhulelwa zilungileyo zokulawula yonke inkqubo